Forum serasera malagasy Momba ilay fety tamin'ny 28 dec 2003 - Dinika forum.serasera.org
Momba ilay fety tamin'ny 28 dec 2003
Fitohizan'ny hafatra : Momba ilay fety tamin'ny 28 dec 2003
hery - 07/01/2004 10:48
Ny biraon'ny Fikambanana Namana avy amin'ny serasera.org dia faly mirary soa ho an'ny namana rehetra na avy eto an-toerana na avy any ivelany.
Dia hitondra soa sy fahombiazana ho antsika anie ity taona vaovao 2004 ity ka ahamatotra kokoa ny serasera.org sy ny namana. Dia faly mirary soa manokana an'i Hery Eugene, Président d'honneur izay nanolotra antsika ity sehatra ifandraisantsika ity.
Tatitra vokatry ny hetsika natao ny 28/12/2003 lasa teo:
- Nanomboka tamin'ny 14h30 ny fety noho ny antony fahataran'ireo mpanomana sy nasaina sasany ;
- Maro ny namana tonga nanatrika, niara nifaly avanja. Niisa 80 teo ho eo ;
- Finaritra avokoa izay nanatrika ary afa-po tanteraka, tsotra sady mendrika (Ambiance nahafinaritra be)
- Nizotra ara-dalana ny fiarahana satria nifandray tanteraka ny namana rehetra tonga, izay niafara tamin'ny fifankahalalana .Natao ny fifankahafantarana ka samy nilaza ny PS ny tsirairay ;
- Mpikambana ao amin'ny namana maro no tonga tao : ny avy any dilambato izay tonga taty an-tanindrazana dia tonga nanatrika avokoa, eo koa ireo avy eto an-toerana lavitra ny renivohitra. Tsy hadinoina ireo nasaina tonga nanohina ny fiarahana ;
- Nafana ny lanonana dia samy faly sy ravo avokoa ireo nanatrika ;
- Nofaranana tamin'ny 8ora sy sasany alina ny lanonana. Niangaviana najanona fotsiny noho ny antony fifanarahana tamin'ny tompon-trano. Sitraky ny fon'ny namana ny mbola niara-nifaly naharitra teo saingy...
- Dia maneho fisaorana tanteraka ho an'ireo izay nanatrika sy nanotrona io hetsika io ny birao. Manantena ny mbola hiarahantsika misalahy amin'ny hetsika rehetra izay kasaina hatao manaraka.Mmba hifankahalalantsika rehetra hatrany araka ny tanjona, hampitsiriana ao anatintsika ny tena fiarahan'ny Namana, tena Namana.
Dia misaotra manokana an'ireo Birao nikarakara (Lucienr, Voahirana, Djioulambut) tsy nitandro hasasarana fa niezaka ny nanatontosa hatramin'ny farany ny lanonana na dia teo aza ny olana maro nianjady tamin'izy ireo.
Isaorana eram-po eran-tsaina koa ireo zay niara nifofotra tamin'ny Birao tamin'ny andraikitra nankinina tamini'izy ireo, tontosany ara-dalana.
Sitraka enti-matory, ho valiana raha mahatsiahy
Izahay Namana rehetra eto Madagasikara dia miarahaba sy mirary soa ho anareo Namana rehetra any dilambato Tratry ny Taona vaovao 2004.
xxx - 07/01/2004 11:41
samy BONNE izany eh!!!!
kitjo - 04/07/2004 11:06
za aloha tany fa ireo namana hitako tao tsisy hitako ato mihitsy e
i Mihanta irery no mba nifanena tamiko tao @ chat....
Ny sisan izay toa tsy hay oe aia aby!